Hahomby ve ny ezaka ara-tsosialy ataon'ny orinasan'ny orinasanao?
Inona no mety hitranga amin'ny tetikadin'ny media sosialy hanomezana valiny amin'ny fampiasam-bola?
Talata, Desambra 15, 2020 Talata, Desambra 15, 2020 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity, ny mpanjifa iray ifaneraserantsika dia nanontany hoe maninona no toa tsy nitondra fiovana ny atiny niasa mafy tamin'izy ireo. Ity mpanjifa ity dia tsy niasa hampivelatra ny fanarahana azy amin'ny media sosialy, fa tsy hampihatra ny ankamaroan'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny marketing ivelany.
Nanome azy ireo sary iray amin'ny haben'ny mpihaino azy izahay amin'ny media sosialy raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy - ary avy eo dia nanome ny fiantraikany teo amin'ny fizarana ny atin'ny mpifaninana. Betsaka ny isa… fa ny fanamafisana ny mpihaino marobe amin'ny tambajotra sosialy dia maty an-drano saika ny olona rehetra eny amin'ny habakabaka. Raha te hifaninana amin'ny atiny dia tsy maintsy mifaninana amin'ny media sosialy koa ny mpanjifanay!
Mba hahombiazana amin'ny varotra ny orinasanao amin'ny media sosialy, mila manararaotra fotoana sy enti-miasa ianao. Ity hazo fanapaha-kevitra ity dia manampy anao hahita raha toa ianao ka vonona ny handefa ezaka amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny sehatra feno izay hitarika amin'ny fifantohana bebe kokoa sy amin'ny fitarihana orinasa.
Amin'izao fotoana izao, mety hanampy fanontaniana fanampiny aho ary izany no hahafahanao mampiroborobo ny atiny amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo mombamomba na atiny navoaka. Raha orinasa vao manomboka ny ezaka ataonao amin'ny haino aman-jery sosialy ianao dia afaka mahazo tanjaka haingana kokoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny fananganana haingana ny mpihaino anao.
Tsara vintana ho anao, ny sehatra media sosialy manana fitaovana tsara sy tanjona kendrena hanao izany. Amin'ny sehatra toy ny Facebook, mety hahazo fihenan-tsoa tsara kokoa ianao amin'ny atiny avo lenta fa tsy amin'ny alàlan'ny pejin'ny orinasanao fotsiny.
Fampahafantarana: Mampiasa ny anay aho Wrike rohy mpiara-miasa.
Tags: hazo fanapaha-kevitraorinasafiverenana amin'ny fampiasam-bolaROIhaino aman-jery sosialyatiny media sosialyfiovam-po amin'ny media sosialytsikera media sosialyfitsaboana amin'ny media sosialyHazo fanapaha-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialyfifandraisan'ny media sosialyloharanom-baovao sosialyfiverenan'ny media sosialy amin'ny fampiasam-bolahaino aman-jery sosialy roifizarana media sosialypaikadin'ny media sosialyRoi ara-tsosialy
Torolàlana feno momba ny fampiasana ny Navigator an'ny varotra LinkedIn